Imikhuba emihle nenqubo yenja Imikhuba emihle nenqubo yenja | Izinja Umhlaba
Imikhuba emihle kanye nenqubo yenja
Mhlawumbe unenjana noma inja endala enomkhuba omubi ongapheli futhi awuqiniseki ukuthi uzoqala kuphi. fundisa isilwane sakho imikhuba nemikhuba emihles. Ukuqeqesha inja yakho akulula ngaso sonke isikhathi, kepha nakanjani kuzuzisa kakhulu.
Izinja yizilwane zomkhuba Futhi indlela abaziphatha ngayo inqunywa ukuthi bazizwa kanjani nokuthi bajabule kangakanani ngemvelo yabo. Ukuze ube nombono omuhle ngempilo futhi ukwazi ukubhekana nanoma yiziphi izinguquko eziza kuwe, kufanele usungule isimiso esizinzile sesilwane sakho futhi usiphathe ngokungaguquguquki.
1 Le yimikhuba nemikhuba ejwayelekile ezinjeni
1.1 Umkhuba wamanzi
1.2 Inqubo yokondla
1.3 Hlela uhlelo lokuzivocavoca umzimba
2 Amakhono ezinja nokuvuselelwa kwengqondo
2.1 Ukuzijabulisa nezinye izinja
Le yimikhuba nemikhuba ejwayelekile ezinjeni
Izinja ezilinganiselwe kahle eziphephe endaweni yazo, enkambisweni yazo, nasempilweni yazo yansuku zonke, zikuthola kulula kakhulu ukuhamba kunoma yiziphi izinguquko noma ukuphazamiseka okuvelayo, kungaba kuhlelwe noma kungalindelekile.
Ingxenye enzima kunazo zonke ukuthi qala ukusungula inkambiso yansuku zonke. Lapho usuqale ukusebenzela izinhloso zakho, okunye kulula.
Ukuqeqesha potty isilwane sakho kumayelana nokungaguquguquki, ukubekezela nokuqiniswa okuhle. Qala ngezisekelo:
Nciphisa ukufinyelela kwazo kwezinye izingxenye zendluKuphakathi kokuvala iminyango yamagumbi, noma amabhokisi okugibela ukuze ube nesikhala sakho.
Ungalinge uyijezise inja yakho uma uye endaweni engafanele. Izingozi ziyenzeka futhi izinja aziqondi imbangela nomphumela ngendlela efanayo nabantu. Khumbula ukuthi inja yakho izothuthuka uma ungaguquguquki.
Klomelisa inja yakho ngokwenza kahle. Mnikeze isipho ngokushesha nje lapho eya endlini yangasese endaweni ekhethiwe.
Yondla inja yakho ngasikhathi sinye nsuku zonke, kubalulekile hhayi kuphela enhlalakahleni yakho engokomzwelo nengqondo, kepha futhi ngoba umzimba wakho uzojwayela iphethini futhi uzozivumelanisa nezikhathi ezimisiwe zokuphakelwa, kanye nenani lezinsizakalo olindeleyo. Zama ukumfunza endaweni efanayo nsuku zonke futhi qiniseka ukuthi indawo iphephile futhi ikhululekile kuye.
Hlela uhlelo lokuzivocavoca umzimba
Sincoma ukuthi uqale into yakho ejwayelekile ekuseni. Ukuhamba ngemizuzu engamashumi amathathu kungakusiza wena nenja yakho ukuhlangabezana nezidingo zakho zokuzivocavoca nsuku zonke, ngenkathi kuthuthukiswa isimilo sesilwane sakho.
Izinja ezikhuthele kakhulu, ukubanjwa ekhoneni ekhaya usuku nosuku, kude nakho konke ukukhuthazeka, akuyona nje into eyisicefe, kepha kuyandisa lokho kuziphatha. Isihluthulelo sokusebenza kulokhu kusabela ukuqeqeshwa okusebenzayo futhi okuhle, kanye nokuxhumana okuhamba kancane nokuqinile.
Ingabe unenkinga yokuthola isikhathi esitholakalayo? Vuka phambilini. Mthathe uhambe naye ngaphambi kokuba imithwalo yemfanelo yosuku ingene endleleni. Uzosiza futhi ukubeka inja yakho esimweni esizolile lapho uphuma uyosebenza.
Amakhono ezinja nokuvuselelwa kwengqondo
Ukufundisa imiyalo eyisisekelo yokuqeqeshwa kwenja yakho kuzodingeka ekuphepheni kwabo nasekuxhumaneni kangcono nesilwane sakho.
Kufanele wazi ukuthi ukuhlinzeka inja yakho ngokwengqondo kubalulekile enjabulweni yakhe. Ungasebenzisa amathoyizi enhlakanipho, ubuqili bezinja futhi ujabulele al imizuzu engaphansi kwengu-15 ngosuku lokuzijabulisa kwamahhala, njengokudlala ibhola naye.Inja esebenza nsuku zonke nomnikazi wayo, isiza ukuqeda ukucindezeleka, iyojabula kakhulu futhi izokwazi ukuxhumana kahle.
Ukuzijabulisa nezinye izinja
Landela eyodwa inqubo efanele yokuxhumana nabantu nezinye izinja nabantu, kubalulekile. Kwenza ikwazi ukuzivumelanisa kangcono nezinguquko ezahlukahlukene zezindawo futhi ifunda ukubekezelela indima yayo yesibili phambi kwakho, umnikazi wayo.
Izinja ezingazange zihlangane kahle zingaba nezinkinga zokuziphatha ebudaleni bazo, njengokwesaba, ukuphinda wenze okuthile noma ukwethula.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Imikhuba emihle kanye nenqubo yenja
Inja yami ithanda ukuzikhulula izichamele ekhaya njalo, angazi ngizoyifundisa kanjani